मृतक महिलाका श्रीमान् भन्छन् : टिचिङमै रहँदा उनलाई भाइरस सरेको हुनुपर्छ ! «
मृतक महिलाका श्रीमान् भन्छन् : टिचिङमै रहँदा उनलाई भाइरस सरेको हुनुपर्छ !
Published : 17 May, 2020 1:29 pm
कोरोनाका कारण मुलुकमा पहिलोपटक एक सुत्केरीको मृत्यु भएको छ । सिन्धुपाल्चोक बाह्रबिसे–९ की २९ वर्षीया महिलाको बिहीबार धुलिखेल अस्पतालमा मृत्यु भएको हो । मृतक महिलाका श्रीमानले भने त्रिवि शिक्षण अस्पतालमै पत्नीलाई संक्रमण भएको हुन सक्‍ने बताए । उनले भने, ‘लकडाउनका बेला हामी घरमै बसेका थियौं । उनलाई कसरी कोरोना लाग्यो ? सोचिराछु । हामीले बाहिरबाट आएकालाई पनि भेटेका थिएनौं । टिचिङमै रहँदा उनलाई भाइरस सरेको हुनुपर्छ ।’